पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई काँठेखोलाका इन्जिनियरको पत्र::Online News Portal from State No. 4
सरकारी सम्पत्तिमा दाईहाल्ने लाईसेन्स पाउनु हो भन्ने बुझाईमा मन्त्री, नेता, मेयर, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल ज्यू,
तपार्ईले सदनमा जे बोल्नु भएको छ सत्य बोल्नु भएको छ । जनताहरु त धेरै पीडित नै थिए आज जनता मात्र हैन नेताहरु पनि पीडित हुन बेला आएको छ र भविष्यमा नेता मात्र हैन देश नै पीडित हुनेछ । तपाई अहिले सत्तासीन दलको प्रमुख नेता हुनुहुन्छ । तपाईले बोलेका र चालेका गतिविधिहरुले समाज परिवर्तनमा धेरै ठूलो अर्थ पक्कै राख्नेछ ।
जनताहरु अहिले अत्यन्त पीडित छन् । सत्तामा पुग्नु र कर्मचारीतन्त्रभित्र छिर्नु भनेको सरकारी सम्पत्तिमा दाई हाल्ने लाईसेन्स पाउनु हो भन्ने बुझाईमा मन्त्री, नेता, मेयर, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । विकृतिका पहाडहरु छन् । यी पहाडहरुमा कुटो कोदालोले खनेर हुनेवाला छैन । पहाड फोड्नु नै पर्नेछ र यहाँ ठूला ठूला बमहरु बर्षाउनुपर्नेछ । आशा छ तपाईले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ । मेरा केही सुझावहरु यस प्रकार छन् ।
(१) देशको लागि मैले पूर्व विशिष्टको नाममा कुनै पनि आर्थिक सहुलियत लिने छैन भनेर टेलिभिजनबाट घोषणा गर्नुस् र पूर्व विशिष्टहरुलाई दिईदै आएको सेवा सुविधा पूर्ण रुपमा कटौती गर्नुस् ।
(२) व्यापारी, कर्मचारी र सरकारी निकायबाट पार्टीहरुले उठाउँदै आएको ठूलो मात्राको चन्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अब उपर उठाउने छैन भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुस् र कुनै पनि पार्टीले चन्दा उठाउन नपाउने कानून निर्माण गर्नुस् ।
(३) हरेक महिना विदेश जानुको सट्टा दुर्गम गाउँ गाउँमा तपाईहरु गएर आर्थिक समृद्धि र विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुस् ।
(४) राजनीतिभित्र चलिरहेको गुण्डागर्दी, हनुमानीकरण, चापलुसीवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिको नाममा व्यापार बन्द गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुस् ।
(५) भ्रष्ट नेताहरुको लिष्ट बनाउनुस् र जनताहरुलाई भन्ने हिम्मत गर्नुस् हाम्रा कुन कुन नेताहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । कुनै पनि भ्रष्टाचारी नेतालाई राजनीतिको आडमा संरक्षण नगर्नुस् ।
(६) कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो भ्रष्टाचार छ र यो भ्रष्टाचारको जालो अन्त गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर शक्तिशाली आयोग बनाई आयोगबाट आएका सुझाहरुको आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तनको लागि कदम चाल्नुस् ।
(७) हाल देशमा ७५३ स्थानीय सरकारहरु छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुले प्रिपेड कमिसन लिएर मात्र काम गर्ने गरेको साथीहरुबाट मैले बुझेको छु । के यस्ता कुराहरु तपाईलाई रिपोर्टिङ गर्ने कुनै संयन्त्र छैन ? हरेक स्थानीय तहभित्र देखिएका डरलाग्दा भ्रष्टाचारका खेलहरु बन्द गर्न कमसेकम आफ्नै पार्टीका मेयर र अध्यक्षहरुलाई उर्दी जारी गर्नुस् ।
(९) ठेक्कापट्टा, परामर्शसेवा लगायतका कामहरु निश्चित ठेकेदार र दलालहरुलाई मात्रै जाने विधि अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले बनाएको छ र सरकारले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको छ, यसका जराहरु सबै काट्नुस् र देशलाई पप्पु कन्ट्रक्सनहरुको गुलाम नबनाउनुस् ।
(१०) प्रहरी प्रशासन भित्रको भ्रष्टाचार, नेपाली सेना भित्रको भ्रष्टाचार, राजनीतिक दल भित्रको भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देशव्यापी महाअभियान चलाउनुस् ।
(११) अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको विकासमा व्यापक जोड दिन कदम चाल्नुस् र देशमा सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्नुस् ।
माथि उल्लेखित अभियानमा साथ दिन हामी करोडौं नेपालीहरु सँगै रहनेछौं । पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल ज्यू हिम्मत गर्नुस् । सदनमा रुन र दुखका गीत गाउन तपाईलाई जनताले पठाएका हैनन् । हरेक भ्रष्ट गतिविधि र भ्रष्टहरुलाई घनले बजार्नुस् र भ्रष्टहरुका जराहरु काट्नुस् ।
काँठेखोला गाउँपालिका-५, विहुँकोट, बागलुङ